दौरा शामिल, मिर्गी, neuralgia विभिन्न प्रकारका -, दुर्भाग्य, धेरै मानिसहरू सामना, लिङ्ग र उमेर बिना कि खतरनाक समस्या। खुसीको कुरा, आधुनिक pharmacological बजार यी रोगहरु सामना गर्न सक्ने लागूऔषधको ठूलो विविधता प्रदान गर्दछ। तिनीहरूलाई को एक "Gabantin 300" छ। प्रयोग, चिकित्सा राय र सिफारिसहरू, रोगी प्रशंसापत्र लागि निर्देशन, मुख्य सङ्केत गर्छ यस लेखमा दिइएको।
को संरचना को सुविधाहरू र जारी फारम विवरण
को दवादारू कडा दाना को रूप मा discharged छ। दबाइ को मुख्य सक्रिय संघटक gabapentin छ। प्रत्येक दानाको वास्तवमा लेबल भन्ने पदार्थ को 300 मिलीग्राम समावेश गर्दछ। को excipients लागि जाँदा, आफ्नो सूचीमा पाउडर, microcrystalline सेलूलोज र मकै स्टार्च पनि समावेश छ। दानाको संरचना समावेश टाइटेनियम डाइअक्साइड र gelatin।
के दबाइ को गुण र कसरी शरीर असर?
धेरै "Gabantin 300" तयारीको बारेमा थप जानकारी रुचि राख्नुहुन्छ। प्रयोग, टिप्पणीहरू, बयान र सिफारिसहरू लागि निर्देशन - यो यी चक्की लिन आवश्यकता सामना हरेक व्यक्ति को लागि रोचक र उपयोगी छ भन्ने जानकारी छ। दबाइ शरीर असर कसरी सिक्न छ सुरु गर्न तथापि।
Gabapentin एक चक्रीय GABA अनुरूप छ। आज यो आफ्नो कार्य को सही संयन्त्र स्थापित छैन किनभने, anticonvulsant गतिविधि संग एक एकदम नयाँ सुविधा छ। यो घटक एक चिकित्सकीय प्रभाव प्रदान, केन्द्रीय स्नायु प्रणाली को विशेष प्रोटिन केन्द्र गर्न बांध कि ज्ञात छ। दबाइ मात्र होइन ऐंठन relieves, तर पनि neuropathic दुखाइ संग मद्दत गर्छ।
उपचारका लागि मुख्य सङ्केत गर्छ
स्वाभाविक, पहिलो प्रश्न मानिसहरूले यसलाई "Gabantin 300" जो अवस्थामा ट्याब्लेटको लिन सम्भव छ कि छैन भनेर सोध्न। यसको प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ - यी मिर्गी विभिन्न प्रकारका छन्। यो दबाइ आंशिक दौरा शामिल लागि चिकित्सा को मुख्य घटक हुन सक्छ उल्लेख गर्नुपर्छ, वा अन्य लागूपदार्थ संग संयोजन मा प्रशासित।
यो आधुनिक चिकित्सा प्रयोग जसमा "Gabantin 300" ट्याब्लेटको मात्र अवस्था छैन। तिनीहरूले अरू के मदत मा? दबाइ postherpetic neuralgia को दुखाइ सामना गर्न मद्दत गर्छ। मधुमेह मेलिटास संग विरामीहरु मा निरन्तर neuropathy गवाहीलाई पनि उल्लेख।
औषधि "Gabantin 300": प्रयोगको लागि निर्देशन
कुनै मामला अनुमति बिना औषधि प्रयोग गर्न सक्दैन मा - एक राम्ररी परीक्षा पछि डाक्टर सही dosing तालिका बनाउन सबैभन्दा प्रभावकारी खुराक निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै यो दाना orally, लगिनेछ पानी पिउने गर्नुपर्छ, र प्रभाव खाना सेवन निर्भर गर्दैन भन्दै लायक छ।
सामान्यतया, विरामीहरु पहिलो सक्रिय पदार्थ को 300 मिलीग्राम प्रबन्ध छन्। हरेक दिन एक सानो वृद्धि खुराक। यसलाई अधिकतम प्रभावकारी दैनिक खुराक तीन खुराक विभाजित गर्न छ जो 900-1800 मिलीग्राम छ, कि विश्वास छ। केही कारण लागि, चिकित्सकीय परिणाम उपलब्ध छैन भने, खुराक थप वृद्धि गर्न सकिन्छ - प्रति दिन 3600 मिलीग्राम को सक्रिय संघटक को अधिकतम राशि। खुराक ट्याब्लेटको बीच अन्तराल बाह्र घण्टा भन्दा बढी हुँदैन।
यसलाई मृगौला रोग संग विरामीहरु आउँदा, दैनिक खुराक 300 मिलीग्राम एक दिन 1-2 पटक कम। सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा, डाक्टर हरेक दुई दिन एक दानाको लिएर सिफारिस गर्छौँ।
छोराछोरीको उपचार को सुविधाहरू
स्वाभाविक, 8 12 वर्ष उमेर बच्चाहरु लागि उपचार योजना अलि फरक छ। त्यहाँ जो एक डाक्टर दबाइ को दैनिक खुराक गणना गर्न सक्छन् धेरै योजनाहरु छन्। कुनै पनि मामला मा, धेरै बच्चाको शरीरको वजन मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, 26-36 किलो वजन बच्चाहरु को लागि दैनिक रकम 900 मिलीग्राम छ। सक्रिय संघटक को 1800 मिलीग्राम - 37-50 को एक शरीरको वजन दैनिक खुराक 1200 मिलीग्राम छ, र 51-72 किलो मा किलो गर्दा। वयस्क विरामीहरु संग यस मामला रूपमा, दैनिक खुराक तीन चरणमा विभाजित गर्नुपर्छ।
त्यहाँ स्वागत गर्न कुनै पनि contraindications हुनुहुन्छ?
धेरै अवस्थामा, विरामीहरु सबै विभाग दबाइ "Gabantin 300" लाग्न सक्छ विरामीहरु कि को प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ। प्रयोगको लागि निर्देशन जसमा निम्न अवस्थामा समावेश सूचीमा contraindications उपस्थिति बारे जानकारी:
को दवादारू कुनै पनि पदार्थ वर्तमान hypersensitivity;
Contraindications छोराछोरीको उमेर समावेश: दाना आठ वर्ष भन्दा कमका पुरानो बच्चाहरु को लागि संकेत छैन;
दबाइ आवश्यक छैन किनभने यसले शरीर, महिला र बाल विकास प्रक्रिया को अवस्था adversely असर गर्न सक्छ, गर्भावस्था को समयमा र breastfeeding गर्दा महिला नियुक्त गर्न छ। अर्कोतर्फ, केही अवस्थामा, आफ्नो डाक्टर यस्तै दबाइ रोगी गर्न सल्लाह दिन्छन् सक्छ, तर यदि मात्र त्यहाँ एउटा जरुरी आवश्यकता छ। चिकित्सा आवश्यक चिकित्सा कर्मचारी को स्थिर पर्यवेक्षण अन्तर्गत ठाउँ लिन अनिवार्य छ।
उपचार समयमा हुन सक्छ कि प्रतिकूल प्रतिक्रिया
त्यहाँ चक्की "Gabantin 300" लिदा उत्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि साइड इफेक्ट हो? डाक्टर को समीक्षा उपचार समयमा जटिलताहरू शायद रेकर्ड भन्छन्। तथापि, तिनीहरूले सक्छन्:
संक्रमण, आंशिक श्वसन र भाइरल संक्रमण, otitis, को मूत्र प्रणालीको सुनिंनु susceptibility वृद्धि;
जो विभिन्न तरिकामा नै प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ एलर्जी प्रतिक्रिया, - को राता र छाला दाना, कर्कश, सुनिंनु, खुजली;
चयापचय प्रतिक्रिया, शरीरको वजन मा विशेष रूप तीव्र वृद्धि, बढेको भोक, रगत ग्लूकोज स्तर मा उतार चढाव, anorexia द्वारा अवलोकन गर्न सकिन्छ;
को स्नायु प्रणाली यस्तो समस्या सुतिरहेको टाउको दुखाइ, parasthesia, स्मृति लोप, convulsions, निदाउरोपनको, incoordination, ataxia, कम्पन, यस विचार को तीव्रता मा परिवर्तन, आन्दोलन विकार रूपमा लक्षण प्रकट हुन सक्छ मा;
त्यहाँ यस्तो निराशा, रूपमा केही मानसिक विकार, हुन सक्छ भावनात्मक lability, भ्रम, irritability, सोचाइ, विभ्रम समस्या;
कहिलेकाहीं दबाइ वाकवाकी र उल्टी, मल, पेट दुखाइ, dyspepsia, gingivitis, bilirubin को उच्च स्तर संग समस्या देखाइएका छन् जो पाचन प्रणालीमा विकार उत्पन्न हुन सक्छ; सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा, यो विकास hepatitis, pancreatitis;
दबाइ मूत्र असंयम, दुर्बलता, स्तन hypertrophy, तीव्र गुर्दे विफलता गर्न प्रमुख, को excretory र प्रजनन प्रणाली को कामकाज असर गर्न सक्छ;
अन्य साइड इफेक्ट बीच कर्णक्ष्वेड, myalgia, मांसपेशी spasms, ज्वरो, थकान, फ्रेंच, हिँड्ने disturbances, परिधीय वा सामान्यिकृत edema, छाती दुखाइ, भंग र अन्य चोट लागेको को likelihood वृद्धि समावेश गर्नुहोस्।
अधिमात्रा मा डाटा
तपाईं पनि उच्च खुराक लिन "Gabantin 300" लागूपदार्थ भने के हुन्छ? प्रयोगको लागि निर्देशन सम्भव अधिमात्रा मा डाटा comprises। एक एकल 49 ग्राम (वा बढी) सक्रिय पदार्थ को बराबर खुराक यस्तो पखाला, भाषण disturbances, गंभीर चक्कर आना रूपमा लक्षण हुन सक्छ। केही विरामीहरु lethargy गम्भीर सुस्ती अप अनुभव।
नियम, symptomatic चिकित्सा तपाईं चाँडै अधिमात्रा को लक्षण हटाउन अनुमति दिन्छ। यद्यपि, रोगी सकेसम्म अस्पताल वितरित गर्न दबाइ को एक अधिमात्रा लिए।
अन्य लागूपदार्थको संग अन्तरक्रियामा, अतिरिक्त जानकारी
यसलाई प्लाज्मा प्रोटीन, छैन कलेजो मा metabolized बाँध्न गर्दैन gebapentin टिप्पण लायक छ, र यसैले यसलाई व्यावहारिक अन्य लागूपदार्थको अन्तरक्रिया छैन। उदाहरणका लागि, यो अक्सर अन्य antiepileptic लागूपदार्थ संग संयोजन मा निर्धारित छ।
तथापि, तपाईं antacids साथ "Gabantin" ले भने, यसको bioavailability लगभग 20% द्वारा कम छ। तसर्थ, उपचार समावेश यदि यी एजेन्ट को दुवै antacid पछि gabapentin दाना कुनै दुई भन्दा घण्टा लिन सल्लाह छन्।
यो दबाइ अभाव epileptic दौरा शामिल को जब अप्रभावी छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो galactose घृणाको साथ विरामीहरु लागि सिफारिस गरिएको छैन। बिस्तारै सञ्चालन दबाइ हटाउन एक हप्तामा को खुराक कम। आकस्मिक निकासी को मामला मा दौरा शामिल फ्रिक्वेन्सी र तीव्रता बढाउन सक्छ।
ट्याब्लेटको "Gabantin 300": analogs र मूल्यहरू
एउटा कारण वा अर्को दबाइ लागि रोगी लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? म केहि दबाइ "Gabantin 300" विकल्प सक्नुहुन्छ? Analogues यसको pharmacological बजार मा अवस्थित र एकदम धेरै। उदाहरणका लागि, एक राम्रो प्रभाव "Gabamaks" जस्ता हालतमा दिइएको छ, "Gabagamma" र "Medital", "Neyralgin", "Nupintin", "Epigan" र "Tebantin"।
एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष दबाइ को लागत छ। 30 दाना को प्याकेज तपाईंले प्रयोग, शहर र अन्य कारक सेवाहरूको फार्मेसी आधारमा बारेमा 220-260 rubles खर्च। 60 दाना समावेश प्याकेज बारे 440-480 rubles लागत। खैर, दबाइ को धेरै analogues धेरै महंगा खर्च हुनेछ।
विरामीहरु र व्यवसायीक समीक्षा
के मान्छे औषधीय उत्पादन "Gabantin 300" को बारेमा भन्न? डाक्टर ले र विरामीहरु देखि दुवै सबैभन्दा भाग लागि समीक्षा सकारात्मक। को तैयारी, दौरा शामिल सामना गर्न मदत गर्छ संख्या र तीव्रता कम गर्छ, र राम्रो चाँडै neuralgia मा relieves दुखाइ। लाभ (चिकित्सा पनि किशोरावस्था मा बाहिर गर्न सकिन्छ) contraindications कम नम्बर, र पनि एक किफायती लागत समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूले धेरै औषधि पसल बेचिन्छन् रूपमा सजिलो ट्याब्लेटको प्राप्त गर्न। आधुनिक चिकित्सा, यो दबाइ एकदम अक्सर प्रयोग गरिन्छ।
"Biprol": प्रयोग, निर्देशन पुस्तिका, वास्तविक समकक्षों लागि सङ्केत गर्छ। के "Biprol" मद्दत गर्छ बाट?
Absorbable मलम - तयारी एक सिंहावलोकन।
रेचक औषधि "Forlaks"। निर्देशन
को salivary ग्रंथि को सुनिंनु: लक्षण र उपचार तरिका
वर्ग सिस्टम: अवधारणा, कक्षा विपरीत
के zastuzheny मृगौला भने? लक्षण र सिफारिस उपचार
अचम्मको रात Anapa। क्लबहरू